XOG: Sheikh Shariif & Xasan Sheikh oo dardar gelinaya qorshahooda Afgambiga DF | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG: Sheikh Shariif & Xasan Sheikh oo dardar gelinaya qorshahooda Afgambiga DF
XOG: Sheikh Shariif & Xasan Sheikh oo dardar gelinaya qorshahooda Afgambiga DF
Dadka Siyaasadda Falanqeeya ayaa aamisan in madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya sida Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh ay ka soo horumareen ololahooda doorashada,islamarkaana sugi la’yihiin doorashada 2020/1,ka.
Inkastoo Xasan Sheikh ay cadda tahay inuu yahay mucaarad dhaliilsan hannaanka Waxqabad ee Dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo hadana Sheikh Sheikh ayaa banaanka isa soo dhigay wuxuuna ku dhegan yahay Dowladda Federaalka.
Siyaasiyiinta qaar ayaa sheegaya in labadan mas’uul oo iskaashada ay caqabad hor leh ku noqoneysa Dowladda Federaalka,islamarkaana mar kale cagaha lala galayo khalalaaso siyaasadeed.
Markii hore C/raxmaan C/shakuur oo ah siyaasi horay xil uga soo qabtay hadana ah Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa ah mucaaradka ugu weyn ee Dowladda ay kala kulanto hadal kul kulul oo mararka qaar soo jeediya indhaha shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha caalamka.
Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif oo madaxweynayaal ka soo noqday dalka ayaa sheegay in Dowladda hadda ay jirto ay hareer martay sharciga kuna takri faleyso awoodda Shacabka iyo Dowladnimada.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa wax kasta u adeegsaneysa awood si ay u muujiso iney jirto Dowlad rasmi ah oo qaadi karta tallaabo kasta oo loo baahdo.
Previous article(Deg Deg) Qarax lala eegtay Gud. Maxkamadda Ciidanka Qalabka sida
Next articleOdayaasha K/Galbeed oo sheegay in xayiraadda uu Farmaajo saaray Shariif ay caddeyn u tahay hal arrin